गाउँकै ‘भिनाजु–ज्वाइँ’ NewsButwaltoday
हाम्रो समाजमा भिनाजु र ज्वाइँ फरक नाता हुन ।
फरक सम्बन्धका कारण यो दुई नाता लाग्ने गर्दछ ।
तर बोमबहादुर राना एउटै व्यक्ति गाउँभरि भिनाजु र ज्वाइँको रुपमा परिचित छन् ।
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका नयाँगाउँका बोमबहादुर राना (३९) गुल्मीकै रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नं. २ मा भिनाजु र ज्वाइँको रुपमा परिचित भएका छन् ।
ग्वादी गाउँमा उनलाई बोलाउँदा जो कसैले पनि बोमबहादुर भनेर बोलाउँदैनन् । सबैको बोलाउने नाम छ ‘कि भिनाजु त कि ज्वाइँ’ ।
ससुराली घरमा गरिने उनको नाताको सम्बोधन गाउँभरिका सबैले प्रयोग गर्छन अनि भन्छन् भिनाजु र ज्वाइँ ।
गाउँमा उनीभन्दा साना उमेरका व्यक्तिले उनलाई भिनाजु भनेर बोलाउँछन् भने ठूला उमेरका व्यक्तिले ज्वाइँ उनलाई बोलाउने र चिन्ने नाता हो ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको ग्वादी गाउँ बोमबहादुरको ससुराली गाउँ हो । ससुरालीका कारण उनी भिनाजु–ज्वाइँको नातामा जोडिएका हुन् । यो नाता अहिले ज्वाइँ भन्दा नजिक छिमेकी र गाउँलेको नातामा परिणत भएको छ ।
ग्वादी गाउँको भट्टबारीमा रहेको केशबहादुर थापाकी छोरी पार्वती थापासँग उनको १९ बर्ष अघि विवाह भएको थियो । उनको अहिले एक छोरी र एक छोरा छन् । छोरी निकिता रानाले यो पटक एसईई दिँदैछिन भने छोरा निकास रानाले कक्षा ९ मा पढ्दैछन् ।
उनी ग्वादी गाउँमा रहन थालेको १३ बर्ष पुगिसकेको छ । कहिलेकाहीँ मात्रै आफ्नो गाउँ नयाँगाउँ जाने गरेपनि उनले अधिकांश समय ग्वादी गाउँमै बिताउने गरेका छन् ।
यस बीचमा उनले भिनाजु र ज्वाइँको नाता मात्रै होइन गाउँकै माया पाएका छन् ।
आफ्नो गाउँ नयाँगाउँ र ग्वादी गाउँमा फरक के छ त ? भन्ने जिज्ञासामा बोमबहादुर भन्छन्–‘मलाई त उस्तै लाग्छ । उता (नयाँ गाउँ) मा पनि म यहाँ जस्तै गरी समय बिताउँछु, यहाँ (ग्वादी) मा पनि सबैले माया गर्नुभएकै छ ।’ जता रहँदा पनि आफूलाई केही गुमाएको महशुस नहुने गरेको बोमबहादुरले सुनाए । हावापानीको हिसाबले नयाँगाउँ ग्वादीभन्दा केही चिसो भएको उनले बताए ।
व्यवहार एकै खालको गर्ने हो भने, आफ्नो काममा खट्ने हो भने र दुःख सुख बाँड्ने हो भने जहाँ बसेपनि सबैको माया र सहयोग पाईने बोमबहादुर बताउँछन् । त्यसैले जन्मघर र ससुराली गाउँ बस्दा कुनै फरक नपरेको उनले बताए ।
सरल र सहयोगी भएका कारण बोमबहादुरको ग्वादी गाउँमा परिचय राम्रो बनेको छ । कोही कसैलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा बोमबहादुर सहयोग गर्न हाजिर हुन्छन् । धेरैजसो मुसुमुसु हाँसिरहने स्वभावका बोमबहादुर ग्वादी गाउँमा ‘जिउँदाका जन्ती र मर्दाको मलामी’ को परिचय छ । सहयोगी छन्, मिलनसार छन् ज्वाइँ त साँच्चिकै ज्वाइँ जस्तै छन् ग्वादीका स्थानीय बुढापाकाहरु बताउँछन् ।
बोमबहादुरले ग्वादीको गाउँमा खाजा पसल चलाएका छन् । उनको खाजा पसलमा खाजा खानको लागि स्थानीयहरु आउने गर्दछन् । खाजा पसलसँगै कुटानी, पिसानी र पेलानी मिल पनि उनले संचालन गर्दै आएका छन् । यसले पनि उनी स्थानीयसँग नजिक भएका छन् ।
त्यससँगै एक सयदेखि डेढसयसम्म कुखुरा पनि उनले पाल्दै आएका छन् । त्यसबाट पनि उनले थप आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।
हँसिला बोमबहादुर भन्छन्–‘ग्वादी गाउँको मिलनसार बानीले मलाई यहाँ खाजा पसल सहितको व्यवशाय चलाउन सघाइरहेको छ । मलाई ग्वादीको गाउँको मायाले जितिरहेको छ ।’ ‘जन्म गाउँ नयाँगाउँलाई जति माया गर्छु, त्यत्ति नै ग्वादी गाउँको माया लाग्छ,’ बोमबहादुरले मुस्कुराउँदै भने ।
अपडेट : 2021-06-19 08:25:45